ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ က တရုတ်နိုင်ငံ မှ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများနှင့်အတူ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး အစီအစဉ် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မည် - Xinhua News Agency
ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ က တရုတ်နိုင်ငံ မှ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများနှင့်အတူ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး အစီအစဉ် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မည်
လာပါဇ်၊ မေ ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ သမ္မတ Luis Arce က တရုတ်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ Sinopharm ထံမှ အသစ်ထပ်မံရောက်ရှိသည့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဖြင့် နိုင်ငံ၌ လူဦးရေ အများအပြားအား ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းလုပ်ငန်းကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ရန်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များအားမေ ၁၇ ရက်တွက် ညွှန်ကြားလိုက်သည်။“ဒီမှာ ကတိပေးထားတဲ့ ကာကွယ်ဆေးအားလုံးရောက်နေပါပြီ’’ဟု ကာကွယ်ဆေးများ ဘိုလီးဘီးယားနိုင်ငံ လာပါဇ် မြို့ ရှိ El Alto လေဆိပ်သို့ ကာကွယ်ဆေးများ လက်ခံရရှိပြီးနောက် Arce က ထိုသို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“အခုတော့ တာဝန်က ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ပဲ ဘိုလီးဘီးယားနိုင်ငံသား အများအပြားမှာ ကိုယ်ခံအားတွေ ရရှိစေဖို့အတွက် လုပ်ငန်းတာဝန်ကတော့ အားလုံး ကာကွယ်ဆေး အမြန်ဆုံးပြီးအောင် ထိုးဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ ဒါဆိုရင် ဘိုလီးယားနိုင်ငံသားတွေအတွက် ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေက အနည်းငယ်ပဲရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်’’ ဟု Arce ကပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့ဟာ ဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ တိုက်နေရဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ သတိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်’’ ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
“ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးယေဘုယျအားဖြင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဟာ ကွဲပြားတဲ့ နိုင်ငံတွေ အကြားမှာ ယှဉ်ပြိုင်မှုမဟုတ်ဘဲ လူသားနဲ့ COVID-19 အကြားတိုက်ခိုက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်’’ ဟု ဘိုလီးဘီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး Huang Yazhong ကပြောသည်။ တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် ကမ္ဘာကြီးသည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုတည်းဖြစ်သည်ဟူသော အယူအဆကို အလေးအနက်ထားပါတယ် ဟု ၎င်းကဖြည့်စွက်ပြောကြားသည်။
“နောက်ဆုံးရောက်ရှိတဲ့ Sinopharm ကာကွယ်ဆေးတွေ က တိုင်းပြည်ရဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းကို အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ လူဦးရေရဲ့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ဖို့ ရည်မှန်းဆောင်ရွက်နေတယ်’’ ဟု ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီး Jeyson Auza ကပြောသည်။
နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် လူဦးရေ ၁,၁၀၆,၇၂၅ ဦးမှာ ပထမအကြိမ် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၂၈၅,၄၈၄ ဦးမှာ ဒုတိယအကြိမ် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူပေါင်း ၃၃၂,၅၆၇ ဦး ရှိပြီး၊ သေဆုံးသူ ၁၃,၅၁၇ ဦးရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းအရ သိရသည်။ (Xinhua)
LA PAZ, May 17 (Xinhua) — Bolivia’s President Luis Arce on Monday called on health authorities to step up the country’s mass vaccination campaign withanew shipment of COVID-19 vaccines from Chinese pharmaceutical firm Sinopharm.
“Here are all the vaccines we have pledged,” said Arce, following the shipment’s arrival at El Alto airport in the metropolitan area of La Paz.
“Now the task is to vaccinate, the task is to finish our entire stock of vaccines to immunize as many Bolivians as possible so there isasmaller chance that people will contract the disease,” said Arce.
“We are still at war with the coronavirus, therefore we must keep our guard up,” he said.
“Vaccination in general around the world is notacompetition between different nations, butafight between humanity and COVID-19,” said Huang Yazhong, Chinese ambassador to Bolivia, adding that the Chinese government “insists on the idea that the whole world isacommunity.”
Minister of Health and Sports Jeyson Auza said the latest batch of Sinopharm doses will speed up the country’s vaccination process, which aims to immunize 100 percent of the “vaccinable” population.
Some 1,106,725 people have been vaccinated so far across the country with 821,241 having received the first dose and 285,484 the second.
Bolivia has so far reported 332,567 cases and 13,517 deaths from the virus, according to data from the Ministry of Health and Sports. Enditem
ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ ကြားဖြတ်သမ္မတ COVID-19 ကူးစက်ခံရ
ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ တွင် မော်တော်ယာဉ်နှစ်စီးခေါင်းချင်းဆိုင်တိုက်မိမှုဖြစ်ပွား၊ လူ ၁၁ဦးသေဆုံး